मालिस गराउदा - Desi Sexy Stories MenuHomeForumSubmit Your Stories
MenuHomeIncestBro Sis Incest StoriesDad Daughter Incest StoriesFamily Group Incest StoriesGay, Lesbian Incest StoriesIncest Pregnant StoriesMom Son Incest StoriesOther Relations Incest StoriesCelebrity NudeRapeHumilation sex storiesNudes PhotosDesi Bhabi NudeDesi Nude PhotosNude photosEnglishDesiOfficeTeacher Ke Saath Sex StoriesCelebritywifeCouple Sex StoriesGirlfriend sex storiesHindi sex storiesMaid Servant sex storiesNaukar/Naukrani sex storiesSchool College Sex StoriesGroupExtreme Photos	Home » Nepali Sex Stories » मालिस गराउदा
घरमा आमा लाई सहयोग गर्न को लागि आजकल ३० बर्से १ भान्छे भनेर आईमाई राखेका छन । त्यो आइमाई को उमेर ३० बर्ष भय पनि देख्दा २२-२४ कि लाग्ने देखिन्छ ।मेरो उमेर खाली १५ भय पनि म भने खाई खेली हुर्केको जवान नै भयको थिय ।त्यो भान्छे आइमैइ ले मलाई सानु बाबु भन्थी ।त्यो आईमाई को नाम शान्ता हो ।हामी मा प्राय धेरै बोलचाल नभय पनि मेरो मनमा कतै कतै शान्ता सँग सेक्स गर्ने चाहाना बधेको थियो । तर घरमा त्यस्तो अवस्थाको शृजना नै भयको थियन कि म शान्ता सँग सेक्स गर्न सकु । मैले भित्र भित्र दिमाग लगाउदै थिय ।तर पनि कुरा मिलेको थियन ।शान्ता पनि बुढो ले छोडेको हुनाले पहिला चाखेको स्वाद त भुलेकी छैन होला जस्तो लाग्दै थ्यो । प्राय रातमा मेरो टाउको दुख्यो भने , म आमा लाई टाउको थिच्न भन्थे ।आजकल पनि म राती राती टाउको दुखेको बाहाना मा टाउको मिच्न भनेर म आमालाई बोलाई रह्नेथे ।आमा आउनु हुन्थ्यो । कतै शान्ता लाई आमा ले मेरो टाउको थिच्न पठाउनु हुन्छ कि भनेर म प्राय टाउको दुखेको बाहना गर्थे तर पनि मम्मी नै आयार मेरो टाउको थिचिदिनुहुन्थ्यो । मैले मौका हेरिरहेको थिय आमा को यकदिन खुट्टा मर्केर हिड्न नै नहुने भएको थ्यो । उहालाई नै म र शान्ता मिलेर रुममा पुर्यायका थियौ । बेलुका खाने पनि शान्ता ले नै आमा लाई रुम मा नै पुर्याई । हामी सुत्ने तर्खर गर्न थल्योउ ।कारीब आधा घण्टा पछी मैले आज नाटक गर्न थाले । मैले मेरो टाउको दुखेको कुरा आमा लाई चिच्यायार भने आमा ले आफु त उठ्न नै नसक्ने भनेर उहाको नै कोठा मा बोलाउनु भयो । मैले पनि अरु बहना बनाय र भने आज त चक्कर पनि लागेह छ । आमाले आज शान्ता लाई बोलाउदै दबाइ पानी सहित टाउको मिच्न भनेर पठाई दिनु भयो ।शान्ता आउने बित्तिकै मेरो त ज्यान नै सन्केर आयको थियो । शान्ता ले दबाई खानु भन तर मैले त्यही राख म पछी खाउला भने । अनि उस्ले मेरो सिरानी पट्टी बस्दै टाउको धेरै नै दुखेको हो भने त दबाई खानु न त कान्छा बाबु भनेर मेरो टाउको मालिस गर्न थाली ।म मेरो ओछ्यान मा नि सुती राखेको थिय ।केहि छिन टाउको दबाय पछी मैले बाहान गरे मेरो त खुट्टा पनि दुखिरहेको बाटय र खुट्टा पनि मालिस गर्न भने । उस्ले हुन्छ भनेर मेरा खुट्टा मसार्न थाली ।मेरो अब सारीर को तापक्रम बढ्न थालेको थियो ।पहिलो पटक कुनै आईमाई को हात सल्बलाउदा मेरो ज्यान नै सिरिङ्ग भयको थियो भने लाडो ठन्कन लाई दाउ गर्दै थियो । बाबुको ज्यान त कती तातो ज्वरो आको छ कि के हो भन्न थाली शान्ता । मैले भने ज्वरो त आको छैन बरु माथी तिर दुखेको छ ।मैले शान्ता लाई अलि माथी तिर पनि मालिस गर्न भनेर खुट्टा फट्ट्याय ।उस्ले कता कता दुखेको छ भनेर मेरो तिघ्रा को बिच मा पनि मालिसा गर्न थाली । मेरो लाडो ले थाम्न सकेन त्यो त ठाडो भएर मेरो अन्डर्वियार नै उचालेर खडा भो । शन्ता पनि यक पटक स्वाद लिई सकेकी मान्छे यहाँ पनि दुखेको छ भनेर मेरो लाडोको फेद मा मुसार्न थाली । अ अलि माथी मैले भने । उस्ले अब मेरो लाडो लाई नै समायार हल्का तल माथी गर्न थाली । अब मेरो पनि बाध टुट्यो । मैले पनि सान्ताको दुध मा दुबै हात ले च्याप्प समातेर भने तिमीलाई दुखेको छैन शान्ता भने । दुख्छ नि मेरो कस्ले मालिस गरिदिन्छ र भन्न थाली शान्ताले । तिम्रो बुढो ले मालिस गर्दैन र भनेर मैले कुरा बढय । उस्को बुढो त बिहे भयको ५ महिना म नै फेरी अर्की कान्छी लेरायर शान्ता लाई छोडेर हिडेको रे । अब मैले धेरै खप्न सकिन अब म उठे अनि शान्ता लाई बेड मा पल्टाय र उस्को म्याक्सी खोली दिए मेरो पनि पेण्टी खोले अब मैले शान्ताको दुध माद्डै चुस्न थाले भने उस्ले मेरो लाडो मुसार्दै थिइ ।मेरो लाँडो ठन्केर खपी नसक्नु भई सकेको थियो ती दुधका पोका हरु कसिला अनी पोटिला थिए अनी मेरो यी भोकाएका हात हरु बिस्तारै ती पोटिला पोटिला अनी सार्हो भएका दुधको मुन्टो तिर सल्बलाउदै जान्छ अनी शान्ता केही बोल्नै सकिन्न शान्ता मजा लिदै जान्छे अनी आवाज दिन्छ अह… अह.. स्स्स. दुबै हातले शान्ताको दुधको पोका पालै पालो माड्न थाले । लाई पनि निकै मजा आए जस्तो थियो , सान्ता “आहहहहहहह ऽऽऽऽऽऽऽ ओहहहहहहहहऽऽऽऽऽऽ उफफफफफफऽऽऽऽऽऽऽ” गर्दै कराउँदै मसार्न थाली. बिस्तारै मैले मेरो मुख सान्ताको दुध निर लगे अनि चुस्न थाले । । दुईटै दुध पालै पालो चुस्न थाले । म जति जोशमा दुध चुस्थे सान्ता त्यती कराउथी । “आहहहहऽऽऽऽऽऽऽ ओहहहहहहहहऽऽऽऽऽऽ, म पनि कस्सी कस्सी दुधको पोकाहरू चुस्न थाले । १० मिनेट जति चुसे पछि म उठे अनि शान्ताको पेन्टी खोले र मेरो पनि सबै लुगा खोलि नांगो भए । शान्ताको दुबै खुट्टा फट्याएर शान्ताको पूती निर मुख लगे । शान्ताको पुती पुरै पानीले भिजेको थियो । पुती वरीपरी छ्याप छ्यापी भिजेको थियो । मैले शान्ताको पुतीको पानी चाट्न थाले । बिस्तारै बिस्तारै जिब्रोले शान्ताको पुतीको टीसी चलाउन थाले । “आहहहहऽऽऽऽऽऽऽऽ ओहहहहहहहहहहहऽऽऽऽऽऽऽ उफफफफफफऽऽऽऽऽऽऽऽ, य ऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ, आहहहहऽऽऽऽऽऽ ओहहहहहहऽऽऽऽऽऽऽऽऽ , शान्ता निकै ईमोशनमा आएर कराउन थाली । म पनि के कम थिए र कहिले जिब्रोले टीसी खेलाउथे , कहिले बिस्तारै टोकिदिन्थे , कहिले दुधको मुण्टा चुसै झै गरी चुसिदिन्थे । मेरा हरेक चुसाई अनि टोकाईमा शान्ता मदहोश हुन्थिन , म पनि जोशमा सो क्रमलाई निरन्तरता दिदै थिए . म जुरुक्क उठे अनि किस गर्दै मैले मेरो दुई औला शान्ताको पुतीमा छिराएर खेलाउन थाले. सान्ता “आहहहहहहह ऽऽऽऽऽऽऽ ओहहहहहहहहऽऽऽऽऽऽ उफफफफफफऽऽऽऽऽऽऽ” गर्दै कराउँदै चाक उफार्न थाली ।अब शान्ता ले मेरो लाडो उसको मुख भित्र हालि । मलाई त के भयो भयो , यस्तो आनन्द त जिन्दगीमा महसुस गरेको थिईन । “अब बिस्तारै बिस्तारै चुस्दै लाडोलाई भित्र बाहिर गरन थाली । बरफ खाको झै गरी उनले मेरो लाडो चुस्न थाली । धेरै मजा आईरहेको थियो । शान्ता निकै मग्न भएर मेरो लाडो मजाले भित्र बाहिर गर्दै चुस्न थाली । कहिले जिब्रोले लाडोको टुप्पो खेलाउथी त कहिले पुरै लाडो मुख भित्र हालेर चुस्थी । करीब करीब १० मिनेट जति चुसेपछि .मैले पनि मेरो लाँडो शान्ताको पुतीमा छिराए । अनि मेरो लाँडो भित्र बाहिर गर्न थाले । त्यसपछि मैले आफ्नो चिकाईको स्पीड बढाउन थाले । बल गरी गरी धक्का दिन थाले । शान्ता पनि तल बाट धक्का दिई मलाई सघाउन थाली । मलाई पनि शान्तालाई चिक्न असाध्यै मजा आई रहेको थियो । १० मिनेट जति उतानो पारेर चिके पछि , म उठे अनि शान्तालाई खाटबाट तल झारे । अनि शान्तालाई घोप्टो पार्न लगाए अनि दुबै हात खाटमा टेक्न लाए । शान्तालाई घोप्टो पारे अनि मेरो लाँडो फेरि पुतीमा छिराए । बल गरेर एकै चोटि ल्वाम्मै मेरो सबै लाँडो शान्ताको पुतीमा छिराए । “ऐयाऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ दुख्यो , अलि बिस्तारै गरन” शान्ता कराउन थाली । थालीको पीडाको कुनै वास्तानै नगरी म बल गरी गरी चिक्न थाले । शायद अब दुखाई कम भएछ , थाली कराउन छोडी र हल्लाई हल्लाई मलाई चिक्नमा साथ दिई । यसरी चिक्दा झनै मजा आउन थाल्यो । मैले बल गरी गरी चिक्न थाले , शान्ता पनि मजा लिई लिई सुस्केरा हाल्न थाली “आहहहहऽऽऽऽऽऽ ओहहहहहहऽऽऽऽऽऽ सीसीसीऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ” १० मिनेट जति यसरी चिके पछि मेरो माल झर्ने सकेत मेरो लाँडोले दियो । “। १०-१५ पटक धक्का दिए पछि , मेरो लाँडोले सबै माल पुती भित्र ओकलीदियो । म केहि बेर हल्लिदै बसे , । त्यस पछि म पुरै थाके अनि शान्ताको ढाँडमाथी नै घोप्टो परेर सुते । त्यो रात नै मैले कारीब ४ बजे सम्म पाच पटक चिके होला शान्ता लाई । तसा दिन देखी राती राती शान्ता नै मेरो कोठा मा आउत्थी । हामी ढुक्क ले रात भरी नै चिकामारी खेली रहन्थ्योउ । यसरि मेरो २ बर्ष जती त शान्ता लाई चिकेर बित्यो । Tweet
मैले दुवै हातलाई बुबु माड्न सक्रिय बनाउदै आफ्नो मुखलाई उसको पुतीमा पुर्याए	लाहुरेकी बुढी सँगको रोमान्स	दुबइमा अन्टी लाई चिकेको मेरो काहानी	About The Author